I-Pino - I-Apartment enombono omkhulu - I-Airbnb
I-Pino - I-Apartment enombono omkhulu
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMa Luisa
UMa Luisa yi-Superhost
Ifulethi elihle, elinombono omangalisayo weentaba, kunye nehlathi, kunye nesandi sokuphumla somlambo, ngaphakathi kwesixeko.
Indlu enezixhobo ezigcweleyo enebhedi ezimbini ezinobukhulu obungamawele, ibhedi yesofa kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo.
IPino yindawo yokuhlala eQuinta Magnolia Uruapan. Inegumbi elinye lokulala eligcweleyo elinombono wehlathi, iintaba kunye nomlambo. Ikwanayo nekhitshi layo labucala, isidlo sangokuhlwa/igumbi lokuhlala. Ubusuku apha buzolile kwaye buzolile, kwaye uya kulala uphulaphule isandi esiphumlayo somlambo. Le yindawo efanelekileyo yokuphumla, ukubhala, ukugxila kunye nokonwabela ubomi.
Indawo esihlala kuyo yindawo ekhuselekileyo, ejikelezwe lihlathi kodwa ikufutshane neendawo ezininzi. Siqinisekile ukuba uya kuyithanda njengoko sisenza. Uya kufumana ivenkile enkulu iibhloko ezintathu ukusuka ekhaya kunye nentengiso yeziqhamo kunye nemifuno nayo ikufuphi. Kukwakho nepaki ezele yimipayini iibhloko ezintathu ukusuka ekhaya ebizwa ngokuba yi "La Pinera". Leyo yindawo entle yokuzilolonga, ukuhamba, ukubaleka okanye ukwenza ipikniki.
I-Uruapan sisixeko esikhuselekileyo esikwintshona-mbindi welizwe laseMexico iMichoacán. Inemozulu encomekayo, kunye ne-avareji yonyaka 18.3 ° C / 65 ° F. Inyanga efudumeleyo yonyaka ngoMeyi ngomlinganiselo we-20.6 ° C / 69 ° F kunye nenyanga ebandayo yonyaka yi-15.4 ° C / 60 ° F. embindini kaJanuwari. Idolophu kunye neendawo eziyingqongileyo zidume kwihlabathi ngeMonarch Butterfly Sanctuary ekufutshane. I-Uruapan ikwabizwa ngokuba yi "Capital of the Avocado" kwaye idume kwihlabathi jikelele ngenxa yomgangatho obalaseleyo weeavokhado, ezithunyelwa kumazwe amaninzi eMelika, eJapan nakwamanye amazwe.
I-Uruapan sesinye sezona zixeko zidala eMexico. Umtsalane wayo oyintloko wendalo nguMlambo waseCupatitzio (obizwa ngokuba "ngumlambo oculayo"). Ipaki yeSizwe uEduardo Ruiz likhaya le "La Rodilla del Diablo", umthombo womlambo onqumla esixekweni.
Igama elithi Uruapan livela kwigama elithi Purépecha elithi "ulhupani", elithetha "indawo yokwakheka ngonaphakade kunye nokuchuma kweentyatyambo zeentyatyambo." I-Uruapan, "indawo apho kuhlonelwa khona inkosana yeentyatyambo", yasekwa ngaphambi kokufika kwamaSpeyin kwaye yayiyiparadesi echulumancisayo kunye nobukhosi obunoxolo obuhambelana noBukumkani bePurépecha.
Umbuki zindwendwe ngu- Ma Luisa
Sithanda ukwenza iindwendwe zethu zizive zisekhaya, ngoko ke siyavuya ukunceda undwendwe lwethu kwaye sibacebise ukuba benze ntoni kwaye bahambe phi, apho banokufumana khona uhlobo oluthile lokutya, apho kuthengwa khona imisebenzi yezandla emihle, indlela yokuya kwindawo ethile. . Sihlale kule ndawo iminyaka engama-30, kwaye sinokukunika iingcebiso ezintle ukuze ube neyona ndawo intle yokuhlala e-Uruapan. Sihlala kwindlu esecaleni kweflethi. Ke sihlala sijikeleze, kodwa uya kukonwabela ubumfihlo be-chalet yonke.
Sithanda ukwenza iindwendwe zethu zizive zisekhaya, ngoko ke siyavuya ukunceda undwendwe lwethu kwaye sibacebise ukuba benze ntoni kwaye bahambe phi, apho banokufumana khona uhlobo…